मोदीले गुमाए, पाकिस्तानले जित्दा नेपालमा खुशीयाली
भारतका चर्चित पूर्वसांसद मणिशंकर ऐयर दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुनै लाग्दा सुटुक्क काठमाडौं आएका थिए । ऐयरले नेपालमा विभिन्न दलका नेताहरु र बुद्धिजीवीसँग भेटघाट गरे । दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने दिन दिल्ली फर्किएका उनले हालै एउटा सनसनीपूर्ण ‘काठमाडौं डायरी’ सार्वजनिक गरेका छन् । एनडीटीभीमा प्रकाशित लामो लेखमा ऐयरले मधेसी दलको कडा आलोचना गरेका छन् ।...
डा. रमेश बिछ्छा – गुलियो बालबालिकालाई सार्‍है मन पर्ने खानेकुरा । चकलेट, मिठाई पाएपछि बालबालिका त्यसै दंग पर्छन् । तर गुलियो खानेकुरा खाँदा दाँतमा टासिन्छन् । मुखमा भएको ब्याक्टेरियाले त्यहाँ एसिड अर्थात् अम्ल उत्पादन गर्छ र दाँतलाई खियाउने गर्छ । यसले गदाँ खाएको खाना दाँतमा अड्कने र क्याबिटी उत्पादन हुन्छ र दाँतमा किरा लाग्छ । यस्तो समस्या नियमित दाँत नमाझ्दा...
कुन्ती पोखरेल दोस्रो संविधानसभापछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल यो देशमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अगाडि वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदय हुँदै थियो । यो पार्टी सशक्त रुपमा जनताको मन जितेर देशकै चौथो पार्टीका रुपमा अगाडि आएको थियो । अनुशासित राप्रपा नेपालमा कुनै गुटबन्दीको ठाउँ थिएन । उदाउँदो राप्रपा नेपाललाई देखेर धेरैले आँखा लगाइरहेका थिए । यही क्रममा...
जीवनशैली नै चिकित्सा, यस्ता छन् फाइदा
डा. विनोद घिमिरे , योग तथा पुनःस्थापना विशेषज्ञ​ आफूसँगै भ​एका निकै सरल र सहज तरिकाहरु (जस्तैः खानपान​, कसरत​, जाडरक्सी, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको त्याग​, तनावको व्यवस्थापन) बाट जटिल रोगहरुको उपचार​ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी ख्याल गर्दैनौँ। देख्दा निकै सामान्य​ लाग्ने यस्ता विधि अहिले बिगबिगीका रुपमा रहेका मधुमेह​, उच्च रक्तचाप​, हृदयघात, डिप्रेसन​, हड्डीका समस्या...
कुमार पन्त प्रत्येक दुई वर्षमा हुने हाम्रो सम्मेलनमा केही न केही महत्वपूर्ण योजनाहरु घोषणा गर्दै आइरहेका हुन्छौं । अब घोषणा भन्दा पनि कार्यान्वयनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने बेला भएको छ । यथार्थतामा विगतमा हामीसँग स्थायी खालको सरकार थिएन । संविधानसभाबाट मुलुकले संविधान पाएको थिएन । १० वर्षे जनयुद्धका कारण अर्थतन्त्र तहस–नहस भइरहेको थियो । लाखौं बिस्थापित थिए ।...
विष्णु विश्वकर्मा – आइतबार दिउँसो पौने ३ बजे ललितपुरको भनिमण्डल चोक नजिकैको चक्रपथमा गाडी सामान्य अवस्थामै चलिरहेका थिए । चर्को गर्मी, गाडीको चापले गाडी बिस्तारै पालो पर्खेर आउने जाने गरिरहेका थिए । काम विशेषले सडकछेउसम्म पुग्नु परेको म सडक पार गर्ने पर्खाइमा थिए । चर्को गर्मी, गाडीको लाम सकिएपछि आरामले सडक पार गर्ने पर्खाइमा बसेको मैले सडक पार गर्ने अवस्था आउनै पाएन...
रजस्वलाः एक प्रसँग
सुशीला शर्मा समाज परिवर्तनका कुनै पनि जायज माग, सवाल र मुद्दा झट्ट सुन्दा असम्भव, कोरा कल्पना र वकवासजस्ता लागे पनि समय क्रममा ती माग सम्बोधन भएरै छाड्छन् । महिला आन्दोलनको इतिहास केलाउँदा महिलाले पढ्न पाउने, घर बाहिरका अफिसियल काम गर्न पाउनुपर्ने जस्ता विषयका लागि पनि ठूलै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । महिलाले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने, मतदानमा भाग लिन पाउनुपर्ने सेना र...
भगवती न्यौपाने हिजोसम्म महिलालाई सम्बोधन गर्दा हेप्नेहरुले यो स्थानीय चुनावपछि अब सम्मानजनक सम्बोधन गर्न थालेका छन् । महिलालाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्दा अनि पहिले आफूले नमस्कार गर्दा अाफ्नो शाख गिरेको, इज्जत नै समाप्त भएको ठान्ने बुज्रुक पुरुषहरु आज त आफ्नो गाउँको विकास निर्माण कार्यको शुभारम्भमा उपस्थित भई समुद्घाटन गर्न भनेर निमन्त्रणा गर्न थालेका छन् । यहि नै हो...
शिक्षण अस्पतालको 'सोसल' ड्युटी
प्रज्वल घिमिरे टिचिङको पुरानो 'इन्डेमिक' मोबाइलको घन्टी बज्दा तपाईंको दिमागमा सुरुमा के आउँछ? सायद प्रेमिका, घर, आफन्त, अनि साथीभाई। कसैले सन्चोबिसन्चो सोध्ला, कसैले खुसीको खबर सुनाउला, घुमफिर रमाइलोको 'प्लान' बन्ला यस्तैयस्तै। तर, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको विद्यार्थीको फोन बझ्ने बित्तिकै उसको पहिलो 'डाइग्नोसिस' हुन्छ, 'सोसल'। उसको मोबाइलमा शुभ समाचारहरु...
मौन समय, मासु चिउरा र पैसा !
मतदान शुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मौन समय सुरु हुन्छ । तर, यही मौन समयमा नै रातारात भोटको किनमेल हुन्छ भन्ने जवर्जस्त मान्यता नेपाली लोकतन्त्रको ‘अभिन्न अंग’ बन्न पुगेको छ । अझ गरीब जनतालाई दुई चार पैसा दिएर, मासु चिउरा खुवाएर वा रक्सी पिलाएर भोट किन्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट धेरै नेताहरु अहिलेसम्म मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरुले आफ्ना मतदातालाई किनबेचको...
पासपोर्ट हैन, देश बनाऔं
प्रितम सुवेदी ‘तिमी कुन सेन्टरमा जीआरई गर्दै हो रे ?’ इञ्जिनियरिङ अध्ययनको आठौं सेमेस्टर चल्दै गर्दा मेरो कक्षामा लगभग सबैले सबैलाई सोध्ने प्रश्न यही हो । ‘मिले त विदेश हिँडिहाल्ने हो नि, सरकारीमा कहिले-कहिले, प्राइभेटमा पनि त्यस्तै हो !’, सबैको उत्तर वा छलफलको विषय पनि यस्तै हुने गर्छ । आजभोलि मेरो मानसपटलमा यस्तै विषय खेलिरहन्छन् । म केहीबेर टोलाउँछु...